Sergio Aguero Sheeko dhalinyaro sheeko xeel dheer
Ciyaartoyda Kubadda Cagta Ingariiska
Ciyaartoyda Kubadda Cagta Weel
Ciyaartoyda Kubadda Cagta Belgium
Ciyaartoyda Kubadda Cagta ee Croatian
Ciyaartoyda Kubadda Cagta Czech Republic
Ciyaartoyda Kubadda Cagta Denmark
Ciyaartoyda Kubadda Cagta Holland
Ciyaartoyda Kubadda Cagta Faransiiska
Ciyaartoyda Kubadda Cagta Jarmalka
Ciyaartoyda Kubadda Cagta Talyaaniga
Ciyaartoyda Kubadda Cagta ee Boortaqiiska
Ciyaartoyda Kubadda Cagta Spain
Ciyaartoyda Kubadda Cagta Switzerland
Ciyaartoyda Kubadda Cagta ee Ghanian
Ciyaartoyda Kubadda Cagta ee Ivory Coast
Ciyaartoyda Kubadda Cagta ee Nigeria
Ciyaartoyda Kubadda Cagta ee Senegal
Ciyaartoyda Kubadda Cagta ee Argentine
Ciyaartoyda Kubadda Cagta ee Brazil
Ciyaartoyda Kubbadda Cagta Columbian
Ciyaartoyda Kubadda Cagta ee Uruguayan
Ciyaartoyda Kubadda Cagta ee Kanada
AllCiyaartoyda Kubadda Cagta IngariiskaCiyaartoyda Kubadda Cagta Weel
Eberechi Eze Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeed ee Untold
Sheekada Carruurnimada Dean Henderson iyo Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeedka ee Untold
Sheekada Carruurnimada Eddie Nketiah Plus Xaqiiqda Untold Biography
AllCiyaartoyda Kubadda Cagta BelgiumCiyaartoyda Kubadda Cagta ee CroatianCiyaartoyda Kubadda Cagta Czech RepublicCiyaartoyda Kubadda Cagta DenmarkCiyaartoyda Kubadda Cagta HollandCiyaartoyda Kubadda Cagta FaransiiskaCiyaartoyda Kubadda Cagta JarmalkaCiyaartoyda Kubadda Cagta TalyaanigaCiyaartoyda Kubadda Cagta ee BoortaqiiskaCiyaartoyda Kubadda Cagta SpainCiyaartoyda Kubadda Cagta Switzerland
CIYAARAHA CADAADADA EE EUROPEAN
Taariikhda Dhalashada Michael Obafemi Plus Untold Biography Xaqiiqda
Sheekada Carruurnimada Tomas Soucek iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Untold
Sheekada Carruurnimada Milan Skriniar Plus Xaqiiqda Udinld Biography
Sheekada Carruurnimada Roman Burki Plus Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeed ee Untold
AllCiyaartoyda Kubadda Cagta ee GhanianCiyaartoyda Kubadda Cagta ee Ivory CoastCiyaartoyda Kubadda Cagta ee NigeriaCiyaartoyda Kubadda Cagta ee Senegal
Samuel Chukwueze Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeed ee Untold
Habib Diallo Carruurnimada Sheeko Dheer Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeedka ee Untold
Sheekada Carruurnimada Jordan Ayew Plus Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeed ee Untold
Sheekada Carruurnimada Ismaila Sarr iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Untold
AllCiyaartoyda Kubadda Cagta ee ArgentineCiyaartoyda Kubadda Cagta ee BrazilCiyaartoyda Kubbadda Cagta ColumbianCiyaartoyda Kubadda Cagta ee Uruguayan
Sheekada Carruurnimada Angel Correa Plus Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Untold
Sheekada Carruurnimada Duvan Zapata Plus Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeed ee Untold
Sheekada Carruurnimada Giovani Lo Celso iyo Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeedka ee Untold
Papu Gomez Taariikhda Carruurnimada oo lagu daray Xaqiiqda Taariikh Nololeedka ee Untold
AllCiyaartoyda Kubadda Cagta ee Kanada
Jonathan David Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Taariikh nololeed ee Untold
DUGSIYADA NORTH AMERICAN SOCCER
Sheekada Carruurnimada Giovanni Reyna Plus Xaqiiqda Untold Biography
Alphonso Davies Childhood Story Plus Xaqiiqda Taariikh Nololeedka ee Untold
Christian Pulisic Childhood Story Sheeko Xaqiiqo Wada-hadal ah
Lee Kang-in Sheekada Carruurnimada iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Untold
Faiq Bolkiah Sheeko Carruurnimo Plus Xaqiiqooyin Biyo La'aaneed ee Taariikh Nololeed
Sheekada 'Minumiino Carruurnimo' Takumi Minamino Plus Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Untold
Sheekada Carruurnimada Caglar Soyuncu iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Untold
Takefusa Kubo Carruurnimada Sheeko Dheer iyo Xaqiiqada Taariikh Nololeed ee Untold
CARRUURTA OTAANIA FOOTBALL
Sheekada Chris Wood Childhood Plus Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Untold
Mile Jedinak Cartheel Story Sheekooyin Xaqiiqo Wadani ah
Suugaanta Sheeko ee Carruurta Mooyee Sheeko Xaqiiq ah
Tim Cahill Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Wada-noolaanshaha
Mark Viduka Hooyo Hore Dabiiciga ah Xaqiiqooyinka Wada-noolaanshaha
Home SOUTH AMERICA FOOTBALL CORRADA Ciyaartoyda Kubadda Cagta ee Argentine Sergio Aguero Sheeko dhalinyaro sheeko xeel dheer
SOUTH AMERICA FOOTBALL CORRADA
Cusboonaysiinta ugu dambeysay June 29, 2020
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada Full of Genius kubada cagta oo ugu wanaagsan ee loo yaqaan Nickname; 'Kun'. Our Sergio Aguero Sheeko Carqi iyo Warqada Xogta Aan Baadi Karin waxay kuu keeneysaa xisaab buuxa oo ah dhacdooyin la taaban karo laga bilaabo waqtigiisa carruurnimada ilaa taariikhda. Falanqaynta waxay ku saabsantahay sheekada Life ka hor Cimilada, Nolosha Qoyska iyo waxyaabo badan oo caddayn ah oo aan caddayn oo yar oo ku saabsan isaga.
Sergio Aguero Sheeko dhalinyaro sheeko xeel dheer -Khibrada Dhalashada
Sergio Aguero waa ilmo yar
Sergio Leonel "Kun" Agüero del Castillo Agüero wuxuu ku dhashay Quilmes, Buenos Aires oo ku yaal 2 June 1988 oo ahaa ilmo labaad oo qoyskiisa oo leh toddobo caruur ah. Hooyadiis, Adriana, waxay ahayd aabe, iyo aabihiis, Leonel, wuxuu ahaa darawal taksi. Waxay ahaayeen labadaba dhalashada ka hor dhalashada wiilkooda Sergio Leonel "Kun" del Castillo Agüero.
Ka hor inta aan Sergio Aguero dhalan
Aguero hooyadeed ayaa ka fogaaday uur. Marka hooyada kaddibna ay uur leedahay lix bilood, gurigeeda yar waxay la wadaagtay lamaanaheeda Leonel del Castillo iyo gabadhii koowaad ee Jessica ee degmada Gonzalez Catan ee Buenos Aires si aad ah u fatahay. Waxay ku qasbeen in ay ka baxaan, oo ay u gudbaan biyo qoto dheer xitaa iyada oo xaamiladeeda. Waxay ku qaataan labadii usbuuc labadii saacadood ee ay jimicsiga ku jireen dugsiga kahor intaanay guriga ku noqon.
Markii hooyadiis ay uuraysatay gabadha Sergio Agüero, waxay ka tagtay caato ah cusbitaal sumcad leh ee magaalada Buenos Aires. Nasiib darro, waxaa laga diiday isbitaalka iyada oo la tixgelinayo ninkeeda awood la'aanta in ay bixiso biilka isbitaalka ka timaadda dhibaatooyinka uurka. Hase yeeshe, talooyin ayaa lagu bixiyay isbitaalada kale ee heli kara oo aqbali kara. Ka dib markii laga diiday isbitaal weyn, labada lammaane ayaa lagu taliyay in ay booqdaan isbitaal aan la aqoon oo ku yaala La Matanza, oo ah qeybta gobolka ee Buenos Aires (Capital of Argentina). Nasiib wanaag, ka dib markii dagaalo dhan, ilmaha u dhashay Sergio Aguero wuxuu ku dhashay cusbitaalkan 2nd ee June, 1988 oo ku saabsan 3: 23pm oo miisaankeedu yahay 9.7 pound.
Sergio Aguero Sheeko dhalinyaro sheeko xeel dheer -Dhibaatooyinka dhalashada dhalashada
Sergio Aguero oo ah waalidiintiisa (Mr iyo Mrs Del Castillo) ayaa loo ogaaday in ay yihiin ilmo yar oo ay maamulaan isbitaalka ka dib dhalashada wiilkooda. Waxay, at 18, iyo lammaanaha Leo, 19, ayaa loo aqoonsaday inay yihiin kuwo aan qaan-gaarin oo aan is qabin.
Qoraalkan, aabihiis Leonel Del Castillo ayaa hoos u dhigay sharciga sharci ahaan si uu u saxiixo diiwaanka isbitaalka. Xitaa mowqifka ugu dambeeya ee la siiyay iyaga lama helin. Waxay awoodi kari waayeen dukumeentiyada aqoonsiga qaran ee kuwaas oo caawin lahaa arrimaha. Nasiib darro, dukumeentigan aqoonsiga qaranka ayaa lagu burburiyay daadadkii kuwaas oo ka tirtiray gurigoodii hore. Tani waxa ay micnaheedu tahay in wiilkoodu uusan ka jawaabin magaca qoyska 'Del Castillo'. Labada waalidba waa inay raadsadaan kaalmo qof kale oo ku sugan magaalada si ay u matalaan aabaha. Intii uu saxiixay, 'Sergio' magaciisa waa magac la aqbalay iyo kan hooyada (Aguero) ayaa loo isticmaalay rikoorka rasmiga ah. Ilaa taariikhda, waxaa loo yaqaan magacan. Si ka duwan sida walaalihiis Yesisa, Gabriela, Maira, Daiana, Mauritius iyo Gaston, wuxuu qaatay magaca hooyadiis, Agüero, oo aan 'Del Castillo' (Aabbaha Sooyaalka).
Sergio Aguero Sheeko dhalinyaro sheeko xeel dheer -Magacaabidda Magacaabista
Intii lagu jiray Sergio Aguero ee xafladda magacaabista, waalidkiis ayaa sidoo kale doonayay in magaciisa dhexe lagu magacaabo 'Lionel', laakiin waxaa mamnuucay xayiraadaha diiwaangelinta madaniga ee Argentine. Ugu dambeyntii waxay ku heshiiyeen magaca dhexe 'Leonel' taas oo iyaga wali ku dhowaa 'Lionel'. Waa ku haboon tahay in la sheego waqtigaas, magaca 'Lionel' mar dambe looma aqbalin magaca carruurta ee degmadaas. Tani waxa ay aheyd sharci lagu hirgeliyay Rosario, halkaasoo mid ka mid ah Aguero oo ah xiddigihii ugu fiicnaa ee Lionel Messi uu ku dhashay waalidiinta Jorge iyo Celia Messi.
Lionel Messi, aad dhashay horaantii (24 June 1987) ayaa ka mid ah kuwa nasiibka leh si loo helo magaciisa oo ay ogolaatay xukuumadda Rosario.
Sergio Aguero Sheeko dhalinyaro sheeko xeel dheer -Taariikhda ka dambeysa Nickname 'KUN'.
Marka Sergio uu ahaa 2 sano, waxay u guureen Florencio Varela, koonfurta Buenos Aires. Tani waa halka qoyska Aguero-Castillo ay saaxiibo dhow la yeesheen deriskooda - Mr Chetti iyo qoyskiisa. Mr Jorge Chetti, Madaxa qoyska, wuxuu ahaa mid siiyay Sergio oo naanaysta ah oo dhamaanteen naqaano maanta.
Ilaha heesaha ayaa ahaa taxane jilaa ah oo Japanese ah (oo markii hore loogu yeero Wanpaku Amukashi Kum Kum) in Sergio uu daawaday TV-ga dadweynaha markii uu yaraa. Sergio wuxuu jecel yahay inuu daawado hindisaha wiilka caajiska ah iyo qoyskiisa, oo ku noolaa cagta ee Kum Kum Mountain. Si dhakhso ah ayuu u noqon lahaa "kum Kum" si joogta ah, taasina waxay noqonaysaa waxyiga nasiibka ah, kaasoo haatan caan ku ah caalamka. Oo sidaas daraaddeed waxay bilaabeen waqtiyo Kun Agüero.
Sergio Aguero ayaa mar uu sheegay, "Waxaan ku soo barbaaray inaan ka mahad celiyo sababtoo ah waa wax gaar ah. Way adag tahay in la arko ciyaartoy isboorti lagu naaneyso ka dib dabeecad kartoon leh! "
Sergio Aguero Sheeko dhalinyaro sheeko xeel dheer -Xiriirka waalidiinta.
Sergio Aguero iyo Aabihiis
Aguero aabihiisa waa ciyaaryahan kubadda cagta ah laakiin waa kooxdii uu ciyaaray ka hor inta uusan ka fariisan ciyaaraha kubadda cagta. Waxa uu ahaa mid ka mid ah tababaraha Aguero sida sawirka sawirka ka muuqata ka hor inta uusan u ciyaarin xiddiga kubada cagta.
Sergio Aguero iyo hooyo
Xiriir xoogan ayaa sidoo kale jira oo u dhexeeya isaga iyo hooyadiis.
Sergio Aguero Sheeko dhalinyaro sheeko xeel dheer -Jacaylka Nolosha
Sergio Aguero iyo gabadha Diego Maradona Giannina
Sergio Aguero wuxuu guursaday gabadha Diego Maradona gabadha afar sano jirka ah. Waxaan haynaa fikrad ah sababta ay u kala qaybsan yihiin 2013 iyo marka furitaanka la dhammeeyey, si kastaba ha ahaatee. Waxay soo bandhigeen Diego Maradona oo ku yaal 2008. Waxay u muuqan laheyd inay si degdeg ah u garaacday, sababtoo ah Sergio Agüero ayaa guursaday Giannina Maradonna isla sanadkaas wiilkoodii Benjamin wuxuu ku dhashay 2009.
Si kastaba ha noqotee, ololka dhalaalaya ee u dhexeeya labaduba waxay lakulmeen wakhtigii 2012 ku soo dhowaaday. Bishii Janaayo 2013 labaduba waxay si rasmi ah u kala qaybsan yihiin. Sergio wuxuu ahaa 24 xilligaas iyo Giannina oo keliya 23. Dhallinyaradu marnaba si fiican ugama foori karaan guurka. Sergio ayaa noqday ciyaaryahankii ugu fiicnaa kubada cagta, waxaana uu awood u leeyahay inuu u dabaaldego guulaha Manchester City. Laakiin Giannina ayaa inta badan ku noolaa Madrid, halkaasoo Sergio uu ciyaaray ilaa 2011 oo uu ku biiray Atlético. Markii uu u soo wareegay Manchester si uu halkaas u ciyaaro, waxa ay u muuqan doontaa in Giannina uusan u dhaqaaqin isaga.
Masaafada sii socota ee u dhaxaysa labadaasi waxay aad ugu farxeen dhamaadka guurka.
Ka dib markii uu kala qeybsamay Giannina ayaa si joogto ah ugu soo laabtay Buenos Aires. Taas ayaa u muuqata in Sergio uu ku adag yahay wax walba, sababtoo ah haatan xitaa wuu awoodi waayay inuu arko wiilkiisa Benjamin, oo uu si cad u soo jiito.
Waxaa la rumeysan yahay in kala qaybsanaanta cunnida ay keentay Giannina ka dib markii Buenos Aires iyo Diego Maradonna ay ka codsadeen in ay codkooda dhiibtaan si ay u taageeraan gabadhiisa da 'yarta yar iyo Sergio. Si kastaba ha noqotee kooxda gabadhiisa, si kastaba ha ahaatee, waxay noqon kartaa mid la yaab leh. Ugu danbeyntii waa inuu ka fogaado Sergio midkood; Kadib dhamaantood, waxay aheyd Diego oo soo bandhigay labadaas.
Sergio Aguero iyo Wiilka (Benjamin)
Wiilka yar, Benjamin Aguero ayaa bilaabay inuu soo bandhigo ciyaartiisa kubadda cagta isagoo leh qaab ciyaareedkiisa fiican ee garoonka. Wuxuu ku guuleystey bakhtiyaan aabihiisa kubadda cagta. Muddo shan sano ah, Benjamin ayaa horey u sameysay caruur kale oo ka xumaanaya kubada cagta.
Sergio Aguero iyo Karina Tejeda
Sergio ayaan wakhti dheer qaadin ka hor inta uusan dhaqaaqin, inkastoo uu xanuunsan yahay inuu maqan yahay wiilkiisa. Isaga ayaa dhawaan la arkay xiddiga reer Argentina ee Carina Tejeda oo loo yaqaan 'Carine Tejeda' waxaana lagu soo waramayaa inay wada joogeen ilaa iyo haatan.
Labadaba isaga iyo saaxiibtiis waxay u muuqdaan kuwo qurux badan. Waxaa badanaa la arkaa oo laga ogaadaa goobaha dadweynaha. Adiga ma jiraan wax war ah oo ku saabsan guurka.
Sergio Aguero waa Love, Toni Duggan
Laakiin ilaa haatan waxa la sheegay inuu kala tagay iyada oo xitaa lala xiriiriyay Toni Duggan, oo u ciyaara kooxda Manchester City FC. Waxay isku wada arkaan awooda rasmiga ah.
Sergio Aguero iyo Toni Duggan
Warar ayaa ka soo baxaya Argentina oo sheegay in Duggan uu xiriir la lahaa weeraryahanka City Aguero, laakiin Duggan ayaa Twitter-kiisa ku beeniyay inuu beeniyay sheegashadiisa, isaga oo ku tilmaamay inay tahay "wax laga xumaado".
Xitaa inkastoo ay jirto diidmo, TV-ga gaar ah ee Aguero ee ku dhashay dalka Argentina ayaa weli caado ka dhigaya in lala wadaago xanta ay xiriirka la leeyihiin.
Sergio Aguero Sheeko dhalinyaro sheeko xeel dheer -Feud leh Marcos Rojo
Sergio Aguero Feud iyo Marcos Rojo
Dhibaatada qadhaadh ee u dhaxeysa Sergio Aguero iyo Marcos Rojo ayaa marba marka ka dhiman ka hor kulanka Manchester derby. Xiddigaha Argentine ayaa wajahaya wajiga Etihad iyada oo aan kaliya seddex dhibcood laga helin garoonkeeda, laakiin dhibicdii hore ee ay ku degi laheyd.
Rojo ayaa ku dhawaaqay ninkeeda hore ee Aguero saaxiibkiis Karina Tejeda, qolka labiska ee Argentina si loogu dabaaldego guushii Nigeria.
Ogeysiis: Aguero ayaa bilaabay inuu la kulmo Karina kadib markii uu guursaday gabadhii Diego Gomez ee Diego Maradona laba sano ka hor.
Sergio Aguero Sheeko dhalinyaro sheeko xeel dheer -Sidee Kubadda Loo Bilaabay
Sidee kubadda cagta loo bilaabay Sergio Aguero
1991, markii Sergio uu seddax sano jir ahaa, qoyskiisa wuxuu u guuray guri yaryar oo fudud meel ka baxsan Los Eucaliptus, oo ku yaal xaafad shilin ah oo ku taal xaafadaha Quilmes iyo Bernal. Ururkan saboolka ahi wuxuu ahaa mid aad u yar markii la barbar dhigo magaalooyinka kale ee waaweyn ee Buenos Aires, laakiin waxa uu lahaa waxoogaa seddex boos oo bannaan oo loo qoondeeyay beeraha magaalada. Dadka deggan, dhalinyaro iyo waayeelba, waxay isugu soo uruuriyeen siyaabo badan si ay u ciyaaraan saacado dheer. Waxa ay aheyd in Sergio uu bilaabay inuu soo bandhigo calaamadihiisii ​​tayadiisa uu kubada ku heysto - sida sannado badan ay soo baxeen, way cadaan doonaan.
Sergio Aguero horaantii ayuu bilaabay kubada cagta
Under Leonel indhaha oo indho indheynaya iyo Adriana ayaa si adag ujooga abaalmarinta iyo ciqaabta, Sergio ayaa ku biiray kooxdiisii ​​ugu horeysay ee kooxo isboorti oo kala duwan oo ku yaal koonfurta Buenos Aires - isaga oo hoos u sii maraya jidkii aabihiis uu kufsaday markii uu yaraa Tucuman. Waxa uu si wacan uga dhex muuqday tartamada shanaad iyo sidoo kale kubadda cirifka kubadda cagta, isagoo isku qoraya nidaamka yaryar ee dhowr kooxood - Loma Alegre, 1 de Mayo, 20 de Junio, Pellerano Rojo, Bristol iyo Los Primos. Wuxuu qayb ka ahaa abuurka weyn ee karti-xirfadeedka ah ee magaalada Buenos Aires uu noqonayo todobaad kasta, iyada oo kumanaan caruur ah oo doonaya in ay ku guuleystaan ​​tartanka sannadlaha ah ee aadka u xiisaha badan.
Young Sergio Aguero (Isboortiga Farshaxanka Kubadda Cagta)
Kun wuxuu ogaa in uu magaciisa ka dhigi doono weeraryahan xirfad leh oo tartan ku jira tartamadaas, isagoo ka soo jeeda garoomada soo bandhigay mustaqbalka weyn ee horyaalka heerka koowaad ka hor. 2005, sanad iyo badh ka dib, Sergio ayaa si joogta ah ugu noqday kooxda Independiente. Ciyaaryahankii hore ee xulka qaranka Argentina U-20 ayaa ku guuleystay abaalmarinta xiddiga reer Argentina.
Sergio Aguero, oo ay soo dhaweynayaan waalidiinta
Sergio ayaa ku guuleystay inuu ku guuleysto koobka U-20 World Cup oo ay marti galisay Netherlands. Tani waxa uu u dabaaldegay qoyskiisa. Ciyaartii ugu danbeysay ee ay la ciyaareen Nigeria ayaa waxaa lagu go'aamiyay rigoore lagu abaal mariyay Sergio oo uu dhaliyay Lionel Messi. Kun wuxuu ku guuleystay guushii uu saaxiibkiisa Emiliano Molina, isaga oo la ciyaaray xilli oo dhan isaga oo ku jira nidaamka dhalinyarada ee Independiente oo si xun u geeriyooday shil baabuur intii lagu jiray Koobka Adduunka.
Muddo yar ka dib markii uu ku soo laabtay Argentina, wuxuu sidoo kale doortay inuu u sharaxo asxaabtiisa isagoo xusuusiyay guul weyn oo uu ka gaaray kulankii Racing de Avellaneda, halkaas oo Kun uu dhaliyay goolka sii wadi doona ciyaaraha kubada cagta Argentine.
Kun, oo kaliya 17 sano jir ah, laakiin horeyba wuxuu ahaa sanamkii dadweynaha, waa inuu qeyb ka ahaa kooxdii uu jecel yahay ee 2006 markii loo wareejiyay Atlético Madrid loogu talagalay 23 million euro - Inta kale waa taariikh.
Sergio Aguero Sheeko dhalinyaro sheeko xeel dheer -auto
Sergio Aguero Lamborghini
Aguero wuxuu isticmaalaa Huracaan - gaari oo uu soo saaro Lamborgini. Waxaa lagu qiyaasaa inuu yahay $ 160,000.00 (hal boqol iyo lixdan kun oo doolar).
Aragtida buuxda ee Sergio Aguero Lamboriniini
Sergio Aguero Sheeko dhalinyaro sheeko xeel dheer -Nico Rosberg oo ku guuleystay tartanka PUMA Race Challenge
Sergio Aguero oo ku adkaaday Nico Rosberg inuu ku guuleysto tartanka PUMA Race Challenge
Kubadsameeyaha reer Argentina iyo Manchester City waxaa loo keenay Donington Park Racing Circuit ee UK, halkaas oo lagu siiyey cashar uu sameeyay Nico Rosberg, ka hor inta uusan awoodiisa u dhiibin tijaabinta wadada mashiinka Mercedes C 63 AMG. Waxa uu ku soo jeeday hareeraha jilibka, isagoo maraya jimicsi heer sare ah oo jilicsan, isagoo cadeeyay in cagihiisa ay u shaqeynayaan sidoo kale ciyaartoyda sida ay u sameeyaan garoonka kubadda cagta. Si kastaba ha ahaatee, ma doonaynin inuu ka baxo si kastaba ha ahaatee, darawalka Jameecada 1 ee Jarmalka ayaa markaa siinaya Aguero inuu raaco noloshiisa Mercedes DTM.
Sergio Aguero Sheeko dhalinyaro sheeko xeel dheer -Xaqiiqooyinka Tatoo.
Sergio Aguero xaqiiqda dhabta ah
Agüero wuxuu leeyahay tattoo oo ku jira gudaha gacanta midig ee lagu qoray Tengwar- waa nooc ka mid ah qoraallada la abuuray JRR Tolkien in Ee ah Eebaha siddooyinkii-waxaa si qeexan u qeexaya Kun Agüero ee xarfaha latka. Waxa kale oo uu leeyahay tattoo on gacanta bidix ee magaca wiilkiisa iyo taariikhda dhalashada. (Hoos eeg).
Sergio Aguero Tatoos iyo macnahooda
Sergio Aguero Sheeko dhalinyaro sheeko xeel dheer -Wiilkii Iskuulka Oo Lagu Xiray Sergio Aguero.
Wiilkii Iskuulka Oo Lagu Xiray Sergio Aguero.
Wiil dhalinyaro ah ayaa laga mamnuucay fasalka uu iskuulkiisa sababtoo ah waxa uu lahaa timo jilicsan oo uu soo bandhigay geesiyaalkiisa kubada cagta. Waxaa lagu amray in uu joogo guriga ilaa uu ka soo laabto, qoyskiisa ayaa sheegtay.
Tom Moseley oo 10-sano jir ah ayaa loo sheegay gadaashiisa gadaashiisa iyo dhinaciisa, kaasi oo lagu sawiray weeraryahanka Manchester City. Isaga ayaa laga saaray iskuulka dhalashadiisa.
Atletico Madrid Taariikhda Kubadda Cagta
Sheekada Carruurnimada Emi Buendia Plus Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeed ee Untold
Sheekada Carruurnimada Lautaro Martinez iyo Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeedka ee Untold
Juan Foyth Sheeko Hore oo Xogta Loo Yaqaano Xogta Loo Yaqaano
Roberto Pereyra Sheeko dhalasho sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka sawir la'aanta
Manuel Lanzini Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka loo yaqaan 'Biography'
Ever Banega Story Plus Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha
Erik Lamela Hooyo Hore Dabiiciga ah Xogta Loo Yaqaano Lahaanshaha
Nicolas Otamendi Sheeko dhalasho sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka loo yaqaan 'Biography'
Taariikhda wax laga badalay: July 19, 2020
Taariikhda wax laga badalay: July 18, 2020
Taariikhda wax laga badalay: July 8, 2020
Goncalo Guedes Childhoood Story Plus Xaqiiqooyinka Taariikh nololeed ee Untold
Taariikhda wax laga beddelay: Juun 27, 2020
Xuquuqda daabacaadda © 2016-2020
Taariikhda la beddelay: Abriil 15, 2020
Carlos Tevez Sheeko Xeeldheer Xogta Waalidka
Taariikhda wax laga beddelay: Juun 29, 2020
Gonzalo Higuain Hooyo Sheeko Xeel dheer
Mauro Icardi Storyhood Plus Xogta Warka Xogta Leh